आफ्नो छोरालाई फसाउने प्रहरीलाई के गर्ने सोचिरहेका छन् शाहरूख खान? :: सेतोपाटी :: Setopati
शाहरूख खान र उनका छोरा आर्यन।
शाहरूख खानका छोरा आर्यनलाई लागुपदार्थ तस्करीसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरेर करिब तीन साता थुनामा राखेको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोले उनीमाथिको आरोप पुष्टि हुने कुनै प्रमाण अदालतमा पेस गर्न सकेन।
बम्बई उच्च अदालतले जारी गरेको १४ पृष्ठको जमानत आदेशमा आर्यनलाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुने कुनै 'सकारात्मक प्रमाण' पेस नभएको उल्लेख छ।
यसअघि धेरैले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उत्तरप्रदेश राज्यको विधानसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर शाहरूखलाई निशाना बनाएको बताएका थिए। उत्तरप्रदेश चुनाव निम्ति हिन्दु-मुस्लिम कार्ड खेल्न खोजिरहेको भाजपाले पछिल्लो समय मुस्लिम समुदायमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। विभिन्न नाममा मुस्लिमहरूमाथि हिंसात्मक गतिविधि भइरहेका छन्।यही क्रममा बलिउड 'बादशाह' शाहरूख खान पनि हाम्रो निशानाबाट बच्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिन उनका छोरालाई झूटा मुद्दामा फसाइएको केही विश्लेषकको भनाइ थियो।
बम्बई उच्च अदालतको आदेशले यो भनाइलाई बल पुर्‍याएको छ।
अदालतको आदेशपछि धेरैले आर्यन र उनका पिता शाहरूखको छवि बिगार्ने प्रपञ्चमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
त्यसो भए के अब बलिउडका सुपरस्टार शाहरूख खान आफ्ना छोरालाई झूटा मुद्दामा फसाएर तीन साता थुनामा कोच्ने नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोविरूद्ध 'फाइटब्याक' गर्लान्? के सोचिरहेका छन् उनी यसबारे?
बम्बई उच्च अदालतको जमानत आदेशमा भनिएको छ- 'सबै आरोपित व्यक्तिले एउटै साझा मनसायका साथ गैरकानुनी काम गरेका हुन् हुन् भनी पुष्टि हुने कुनै पनि सकारात्मक प्रमाण अदालतमा पेस हुन आएन ... आर्यन खान, अर्बाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमिचा एउटै क्रूज (पानीजहाज) मा यात्रा गरिरहेका थिए भन्दैमा उनीहरू पनि लागुपदार्थ तस्करीको षड्यन्त्रमा सामेल थिए भन्ने अभियोग लगाउने आधार बन्दैन।'
अदालतले यसरी प्रस्ट भाषामा नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोको कार्यमाथि प्रश्न उठाएपछि अब यही प्रश्न शाहरूख खानका वकिलहरूको टिमले गर्नेछ।
उनीहरूले आर्यनको पक्राउमा मुख्य सूत्रधार मानिएका नार्कोटिक्स ब्युरोका उच्च अधिकारी समीर वाङ्खडेविरूद्ध अदालतमा मानहानिको मुद्दा हाल्ने संकेत दिएका छन्।
शाहरूख परिवारसँग निकट एक व्यक्तिले 'बलिउड हंगामा' नामक अनलाइनलाई भनेअनुसार यो मामिलामा शाहरूख छिट्टै फाइटब्याक गर्ने तयारीमा छन्।
'अहिले यो मुद्दामा केही नबोलेका भए पनि शाहरूख खान यसरी नै हातमा बाँधेर बस्ने मनस्थितिमा छैनन्। उनी आफ्ना वकिलहरूसँग निरन्तर परामर्शमा छन्। वकिलहरूको टिमले आर्यन खानलाई बिनाआधार किन पक्राउ गरियो भनी प्रश्न गर्दै समीर वाङ्खडेविरूद्ध मुद्दा हाल्न सकिने सल्लाह शाहरूखलाई दिएको छ। त्यसैले, केही समयमै वाङ्खडेलाई अदालत तानेर शाहरूखले फाइटब्याक गर्न सक्छन्,' शाहरूख निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बलिउड हंगामा लेख्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८, १३:३३:००
'मिर्जापुर' का ललितको निधन, बाथरुममा भेटियो शव